အကောင်းဆုံး အထည်အလိပ်အရွယ်အစားဓာတုပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး အထည်အလိပ်အရွယ်အစားဓာတုပစ္စည်း ကိုရှာဖွေရန်။
CHERNG LONG ENTERPRISE CO., LTD. တွင်တည်ရှိသည် Taiwan ထုတ်လုပ်ခြင်း, ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပို့ကုန် အထည်အလိပ်အရွယ်အစားဓာတုပစ္စည်း တစ်ဦးအတွေ့အကြုံနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းနှင့်အတူငါတို့ရှိသမျှသည်ကမ္ဘာအနှံ့နိုင်ငံအများအပြားနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတင်ပို့ရောင်းချကြပါပြီ။ ထို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အကြားနာမည်ကောင်းရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ယခု!
။ အဆုံးဆက်တိုက် optimization, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှတဆင့်ကျနော်တို့ ll ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်ခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစား ?? ။ သင်အခမဲ့ဖြစ်သည်မှန်လျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ပုံစံ - PE-20
Waterborne polyester ဗဓေလသစ်(မဟုတ်-လောင်ကျွမ်းသော)
ဤအေးဂျင့် PE-20 ရေထဲမှာ polyester ဗဓေလသစ်ပျံ့နှံ့သည်.၎င်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော formalin မပါဝင်ပါ,အရာသည် polyester ဖိုင်ဘာအားအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူခြင်းကိုမထိခိုက်စေဘဲခိုင်မာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်.အရည်ပျော်ပစ္စည်းနှင့်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်.polyester ထည်အပေါ် processing ပြီးနောက်,၁၀၀ ရှိနိုင်တယ်%ပြန်လည်အသုံးပြုနှင့်အမျှင်သို့ remade.
၎င်းသည်အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူမှုကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ polyester fiber ကိုမာကျောစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်.
၎င်းကိုပိုးထည်အတွက် bundle agent အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.textileauxiliaries.com.tw/my/textile-sizing-chemicals.html
အကောင်းဆုံး အထည်အလိပ်အရွယ်အစားဓာတုပစ္စည်း ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် အထည်အလိပ်အရွယ်အစားဓာတုပစ္စည်း ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ အထည်အလိပ်အရွယ်အစားဓာတုပစ္စည်း ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan